Amanani entengiso ka-2014 avela kwiNtengiso yeNtengiso yeLifu | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-23 kaDisemba ngo-2014 NgoMvulo, nge-29 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
Mhlawumbi enye yezona zinto zibalulekileyo ziphuma ngo-2014 kukuba iinkampani ziqala ukujonga kufutshane kuhambo lwabathengi. Zifunyanwa njani iimveliso zakho kwi-Intanethi? Ulikhokela njani ithemba kwinto efumanekayo ukuya kuguquko? Kwaye okubaluleke nangakumbi, wenza ntoni ukuqinisekisa ukuba uyabugcina nokwakha ubudlelwane obuxabiseke ngakumbi kunye nabathengi bakho?
Ilifu lokuThengisa ngeNtengiso lifumanise ukuba i-86% yabathengisi abakwinqanaba eliphezulu bayavuma ukuba ukuba nohambo oluhambelanayo lwabathengi kubalulekile kodwa yi-29% kuphela yeenkampani zeshishini ezizilinganisela ngokwazo njengezisebenzayo ekudaleni olo hambo. Esi sisithuba esikhulu! Kwaye ndiyakholelwa ukuba itekhnoloji kunye nezixhobo zigubungela ukusasazeka. Sisapheka ibhetshi kunye neenzame zokuthengisa ukuze sihambisane neemfuno zamaqela ethu okuthengisa kunokuba sisebenzise izibonelelo ngobuchule.
Okubi nangakumbi, kunqongophele kubahlalutyi italente kolu shishino kunye nokusilela kothethathethwano lokuzibandakanya kuyo yonke eminye imiba yombutho exhasa ukuthengisa-njengenkonzo yabathengi okanye uphuhliso lwemveliso. Ukuba bendiyintengiso encinci namhlanje, bendizakube ndichitha ixesha lam elininzi ndincedisa ekoyiseni izicwangciso zentengiso ezifanelekileyo kunye nokusebenzisa izisombululo ekunikeni ingxelo ngokuchanekileyo kwezo zicwangciso.
Njengoko uhambo lwabathengi lucaca ngakumbi, ukuba nefuthe kolo hambo kunye nokulinganisa uhambo kunzima kakhulu kunentambo elula yokuthengisa!
Le infographic ibamba ezinye izinto eziqaqambileyo ezivela kuphando lwe-Salesforce ye-Cloud ngo-2014. Abathengisi baya kupapasha ingxelo yabo yoBume beNtengiso ka-2015 ngoJanuwari.
tags: Uhlalutyocmoizixhobo zokusebenzisanaulawulo lokuqukethweizixhobo zecmuhambo lwabathengiInkonzo eyenzelweIinkcukachaemail Marketingisoftware yocwangciso lwezixhoboERPisoftware ye-erpulungelelwaniso lwangaphakathiUhlalutyo lokuthengisaukuzenzekela ngokuzenzekelayoimeyile ephathekayoubukrelekrele bengqikeleloingeniso ngonqakrazo ngalunyeIlifu lokuthengisa labasebenziizixhobo zokumamela ekuhlaleniizixhobo zokupapasha kwezentlalo
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2014 ngo-11: 22 AM
Kuyamangalisa ukuba nakwiinkampani ezinkulu, kuphela iipesenti ezingama-29 zabathengisi baziva belawula ngokufanelekileyo uhambo lwabathengi. Kuvakala ngathi kulapho iinkampani kufuneka zijolise khona ngo-2015…